Maanta, Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay soo warisay hal dhimasho oo kale gobolka oo dhan | KWIT
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu ku dhawaaqay qorshayaal xarun kale oo tallaal ah oo COVID-19 ah Isniinta soo socota, 8-da Maarso ee Xarunta Dhacdooyinka Tyson. Ballamadu waxay furmi doontaa berri (Talaado) galabnimo markay tahay 3 galabnimo. khadka tooska ah iyo taleefoonka (712) 234-3922. Rugtan caafimaad waxaa ka mid ah dadka ka weyn da'da 65, laakiin waa la ballaariyey oo waxaa lagu soo daray shaqaale ka shaqeeya hilibka.
Dhanka kale, Tyson Foods ayaa ku dhawaaqday in talaal la heli doono dhamaadka todobaadkan dhamaan shaqaalaha ka shaqeeya hilibka, oo ay ku jiraan Storm Lake iyo dadka degan Iowa ee ka shaqeeya warshada Tyson ee Magaalada Dakota.
Daraasad bille ah oo cusub ayaa muujineysa sii socoshada dhaqaalaha ee dhammaan saddexda Gobol ee Siouxland. Laakiin hoggaamiyeyaasha ganacsatadu waxay muujiyeen walaac ay ka qabaan sicir bararka sii kordhaya iyo caqabadaha ka jira silsiladda wax soo saarka oo dib u dhac keena Xaaladaha Ganacsi ee Mid-America ee Jaamacadda Dhexe ee loo yaqaan 'Creighton University' ee bisha Febraayo waxay ku yimaadeen 69.6 xoog leh laga bilaabo Janawari 67.3. Dhibco kasta oo ka sarraysa 50 ee tusmooyinka sahanka waxay soo jeedinaysaa koritaan, halka dhibic ka hooseysa 50 ay soo jeedinayso hoos u dhac dhaqaale.
Shirkadda SkyWest Airlines ayaa la siiyay qandaraas saddex sano ah oo ay la qaadatay Waaxda Gaadiidka ee Mareykanka si ay duulimaadyo toos ah uga siiso Gegada Diyaaradaha ee Sioux Gateway ilaa Chicago laga bilaabo kowda Abriil. SkyWest, oo ah adeeg goboleed ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee United Airlines, ayaa garaacday shirkadda American Airlines. Mareykanku wuxuu hadda adeegga ku bixiyaa barnaamijka Adeegga Cirka ee Muhiimka ah. Barnaamijka waxaa loo sameeyay si loo siiyo bulshooyinka yaryar adeegga hawada. Skywest hadda waxay u shaqaysaa adeeg maalinle ah Denver.